Fitantanana ny fitantanana - Hitady ireo mpitsidika amin'ny Finday Manokana
Home » Management Professionals
Brenda Thompson, Lehiben'ny mpanatanteraka - Broker
Brenda dia mpandraharaha ary mpamorona. Miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hividianana brokerage any North Carolina, Pennsylvanie, sy Maryland izy ary efa mpanolontsaina maherin'ny 26 taona. Talohan'ny naha-Talen'ny Marketing tao amin'ny New York Stock Exchange, dia nanana orinasa roa izy, ary anisan'izany ny franchiseo misy alikaola any Long Island any New York. Tao amin'ny 1991 dia nahazo ny fahazoan-dalany ny mpampindram-bola NY izy ary nahazo ny laharam-boninahitra ambony indrindra tao amin'ny masoivohom-pirenena francais roa.
Ao amin'ny 1995 dia namorona sy nanolotra ny "Finds ..." manokana izy, ny toetran'ny toetra tokana ho an'ireo izay misafidy zavatra avy ao amin'ny ordinatera, ny loka nahazo tombony, ny fandraisam-bahiny, ny fandraharahana ara-barotra. Izy dia nitodika ny fahaizan'ny varotra ara-barotra ho asa fanompoana sarobidy ho an'ny tompona trano, toy ny tenany ihany, izay miatrika fanamby rehefa mivarotra trano tsy manam-paharoa sy tsy mahazatra.
Jim Skinner, Lehiben'ny mpanatanteraka - Broker
Jim no mpanorina, filoha ary tale jeneralin'ny Terregena Inc. izay tafiditra ao Canada sy Etazonia. Mpikambana ao amin'ny Biraon'ny Mpanolo-tsaina ny Forge ao amin'ny Oniversiten'i McMaster ao Hamilton, Kanada; mpanolo-tsain'ny Masoivoho Federaly momba ny Fampandrosoana ara-toekarena federaly federaly; ary, mpikambana ao amin'ny Biraon'ny Mpanolo-tsainan'ny Group Conseil Impact, ao amin'ny Rotman School of Management ao amin'ny Oniversiten'i Toronto.
Izy no Filohan'ny Biraomiera misy orinasa telo - iray ampahibemaso, roa tsy miankina ary mpikambana iray ao amin'ny biraon'ny tale momba ny orinasam-panjakana maromaro sy tsy miankina, anisan'izany ny Filohan'ny Komitin'ny Fanavotana sy ny Volan'ny Kaominina ary mpikambana iray ao amin'ny Komity Mpanankatena.
Jim dia filoha sy tale jeneralin'ny orinasa mpanao varotra ampahibemaso ary mpandray anjara manan-danja amin'ny fanombohana sy fitomboana orinasa maro. Izy no mpanatontosa orinasa fito avy aorian'ny filoha, filohan'ny Corporate Vice President & General Manager sy ny Filoha Vice-Sales sy Marketing ho an'ny orinasa maro samihafa ao anatin'izany i Philips Medical Systems sy Becton Dickinson taorinan'ny fikarakarana sy fivarotana amin'ny Johnson sy Johnson ary Bayer.
Jim dia mpikambana mpanorina ao amin'ny biraon'ny tale sy komity mpanatanteraka ao amin'ny orinasa biotechnologie indostria, mpikambana ao amin'ny Birao Mpanolo-tsain'ny Graduate School ao amin'ny Oniversiten'i Farihin'i Caroline Avaratra ary notendren'ny Governora James B. Hunt ho Filohan'ny Karnavaly Entrepreneurial Development Board. Izy dia nahazo mari-pahaizana tao amin'ny Oniversiten'i Ryerson, University of York sy ny Oniversiten'i Toronto.
James Scott Skinner, Filoha lefitry ny Filoha sy ny lehiben'ny Financial Financial
James Scott Skinner, CPA, CMA, MBA, B. Comm., Dia mpanatanteraka ara-bola efa za-draharaha. Izy no nitàna toerana ambony tahaka ny Controller sy orinasa maro samihafa nasionaliny izay nitantana ny sampan-draharaham-bola sy ny fitantanam-bola ary tompon'andraikitra amin'ny fanadihadiana ara-bola, ny fandrindrana ara-barotra, ny fanarahan-dalàna ary ny tatitra ara-bola.
Izy dia nahazo mari-pahaizana momba ny varotra Komitin'ny varotra sy Master of Business Administration izay manana diplaoma avo roa heny amin'ny toekarena sy ny orinasa fandraharahana avy amin'ny Oniversiten'i Toronto, Kanada. Jim dia mpikambana ao amin'ny Society of Account Accountants - tompon'andraikitra tompon'andraikitry ny fitantanam-bola (CMA) ary mitazona mari-pahaizana momba ny fanarahan-dàlana Export, Six Sigma Green Training and Essentials Management (Leadership Training).